(SAWIRRO) Olole lagu gubayo bakhtiga xoolihii ku dhammaaday abaarta oo Puntland ka socda. | puntlandi.com
(SAWIRRO) Olole lagu gubayo bakhtiga xoolihii ku dhammaaday abaarta oo Puntland ka socda.
Ururka Kobciye oo ay ku midaysan yihiin dhalinyaro waddaniyiin reer Puntland ah ayaa bilaabay olole ballaaran oo lagu gubayo bakhtiga xoolihii ku dhammaaday abaartii dheerayd eek u dhufatay guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaanna degaannada Puntland.
Ururkaan oo taageero ka helaya wasaaradda Arrimaha gudaha Dowladda Puntland ayaa todobaadyadii la soo dhaafay sameeyey oleole xooggan oo lagu gubayo bakhtiga xoolaha ee daadsan degaanno badan oo ka tirsan gobollada Mudug iyo Nugaal,waxaana la nadiifiyey dhul ballaaran oo ka tirsan labadaasi gobol.Kobciye ayaa ku hanweyn in uu ololehaan gaarsiiyo dhammaan gobollada Puntland,balse ma jirto cid ka gacan siinaysa howlsha intaa le’eg marka laga reebo wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladda Puntland,waxaana uruku codsanayaa in laga taageero sidii ololehaani taabbo-gel ku noqon lahaa.
Bakhtiga xoolihii ku dhammaaday abaarta’SIMA’ ayaa daadsan dooxooyinka waaweyn iyo dhulka biyo-dhaca ah ee dhammaan degaannada Puntland,waxaana jira cabsi xooggan oo laga qabo in bakhtiga xoolahaasi uu sababo cudurro halis ah iyo caafimaad-darro baahsan.Si lamid ah xayawaanno badan oo ku dhintay abaarta ayaa daadsan dhulka miyiga ah iyo ceelasha qaar ,sida ay soo sheegayaan dadka reer guuraaga ah.
“Waxaan aragnay bakhti aad u badan oo bahalka doofaarka ah,kaasoo ka buuxa meelaha jeexdimaha la yiraahdo ee dhinaca dhoodida gobolka Sool.dadka ayaa biyaha uga cabsanaya,maadama uu doofaarka bakhtigiisu ku milmay dhulka biyo qabatinka leha”,sidaasi waxaa yiri mid kamid ah dadka reer guuraaga ah oo warbaahinta la hadlay.
Guddoomiyaha Ururkaan Kobciye Cabdishakuur Aadan Dheere ayaa Warbaahinta u sheegay in ay todobaadkii saddexaad si xiriir ah ugu jiraan hawlaha bakhti gubidday,islamarkaana ay sii wadayaan ololeahaan ilaa iyo inta ay ka cirib-tirayaan dhammaan bakhtiga xoolaha ee daadsan degaannada Puntland,wuxuuna codsaday in taageero laga siiyo ololehooda.
“waxaan manta ku jirnaa asbuucii saddexaad oo bakhti gubid ah,waxaana bartilmaameed noo ahaa berkadaha,ceelasha,xurfooyinka iyo balliyada,waxaana nagu kallifay ololehaan markaan aragnay oo u adkaysan weynay waxaan ku dhex noolahay ee aan damiirku nasiinkarin,islamarkaana halista ku ah nolosheenna”,ayuu yiri cabdishakuur wuxuuna intaa raaciyey”waxaan codsanaynaa in nalaga taageero ololehaan”.
Dhinaca kale waxaa la soo sheegayaa in meelaha qaar oo ay ku jirto tuulada jalam in ay qurmeen berkadihii laga cabbijiray,kadib markii roobka gu’uga ee uu ka buuxiyey bakthiga xoolaha oo diiqalyadu ka soo qaadday meelo foq,islamrkaana haatan dadka degaannadaasi ay soo wajahday cabsi xooggan oo ku aaddan caafimaadkooda.
Agaasimaha Waaxda Horumarinta Reer miyiga Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland cabdifitaax Cumar Ismaaciil oo door muhiim ah ka ciyaaray ololehaan ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay ololehaan uu sameeyey Kobciye oo uu ku tilmaamay kuwo ka shaqeynaya hawl adag oo xilligeedii timid,islamarkaana ay tusaale u yihiin horumarka Puntland.
Agaasimaha ayaa ka codsaday hay’adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah in ay caawiyaan Ururka Kobciye ee dadaalka ugu jira sidii ay dadka reer Puntland ka badbaadiyaan halis bakhtiga sida baaxadda leh ugu baahsan dhammaan degaannada Puntland.